WAA MAXAY SABABTA CALEEMAHA ZAMIOKULKAS, CUDURADA UGU WEYN IYO CAYAYAANKA EE WARSHAD AYAA HURUUD ISU BEDDELA - XAKAMAYNTA CAYAYAANKA
Sida loo ilaaliyo "dollarka dollar" ka soo cayayaanka iyo cudurada
Zamioculkas waa qurux qurxoon oo qurux badan. Tani dhirta qurxinta leh ee dhirta leh leh taaj qurux leh iyo caleenta cagaaran ee madow. Laakiin ka dib markii muddo ah ka dib markii zamiokulkas lagu beeray dhul furan, caleemaha waxay noqdaan huruud. Qodobkan waxaan eegeynaa sababta ay taasi u dhacayso, iyo sidoo kale garashada sida loo xaliyo dhibaatada.
Dhibcaha mugdiga ah ee zamiokulkas ka baxo: Maxaa la sameeyaa?
Zamiokulkas, sida dhirta kale ee ornamental kale, waxay leeyihiin cuduro: dhibco mugdi ah ayaa ka muuqan kara caleemo. Dhibaatada noocan oo kale ah waxay dhacdaa haddii geedku uu ku jiray heerkul hooseeya muddo dheer ama istaagay qabyo-qabad. Sidoo kale, waraabinta xad dhaafka ah waxay keenaysaa caleen madow. Habka ka baxsan xaaladdan waa mid sahlan: waxaa lagama maarmaan ah in la soo dejiyo kuleylka iyo biyaha si caadi ah, u baabi'iyo joojinta dareeraha iyo joojinta korantada.
Sida loo daaweeyo warshad ka soo kallanaayo rootka
Haddii zamiokulkas ay leeyihiin dhibco mugdi ah asliga ah, tani waa calaamada ugu horeysa ee kallana root. Sababta ay u jajabisay nidaamka xididka, ku dul dhejin jirey, waa waraabin xad dhaaf ah heerkulka hooseeya.
Waa muhiim! Zamioculkas wuxuu jecel yahay diirimaad, laakiin uma dulqaadan karo kuleylka. Qoyaanku waxay u baahan yihiin in lagu hayo sidoo kale dhexdhexaad ah, laakiin warshadu waxay u dulqaadataa abaarta. Waxaa la barbardhigi karaa geel, maaddaama dabeecadda ay diyaarisay zamiokulkas suurtagal ah inay suurtagal ka dhigto biyaha kaydka.
Cawska dhoobo culus ma bixin karo biyo nadiif ah iyo hawo wanaagsan, sidaas daraadeed xididada qanjidhada iyo rootida. Sababtan awgeed, baadiyaha inta badan wey dhimataa. Laakiin weli waa suurtogal in la badbaadiyo maalmaha ugu horeeya, haddii aad qodo tuubo iyo ka saar dhammaan hababka saameeya, oo ku rusheeyaa xaleef dhuxusha dhulka. Haddii zamiokulkas uu jiran yahay oo dhibco mug leh ka muuqanayo jirridda, ka dibna geedka oo dhan, oo ay ka mid yihiin xididada, waxay u baahan tahay in lagu daaweeyo fungicides-foicideed, tusaale ahaan, Oxyf ama Fundazol. Ka dibna ku dhex dheji dheri cusub oo gabi ahaanba bedelay ciidda. Haddii geedi socodka guntanku uu horayba u noqon waayey, markaas tuber waa in la gooyaa oo la tuuraa, iyo caleemaha loo isticmaalo dhalmo dheeraad ah.
Ma taqaanaa? Zamioculkas waxaa soo ogaaday botanists horaantii 1830. Nuqulladii ugu horeysay ee geedkan ornamental waxaa laga helay buurta buuraha ee Bariga Afrika.
Sida loo sameeyo ubaxyada Zamiokulkas
Zamioculkas waa wakiil ka mid ah flora qurxinta, beerashada iyo dayactirka ee jawiga guriga ku yaala wuxuu u baahan yahay xaalado gaar ah. Noocyada iftiinka, kuleylka iyo waraabinta waa inay ahaadaan kuwo dabiici ah intii suurtagal ah.
Tan iyo markii Zamiokulkas uu ka soo baxo geesaha diiran ee dhererka Afrika iyo dhagaxyada dhagaxyada, dhab ahaantii ma barbarayn doono dhinaca waqooyiga ee guriga ama aqalka. Si aad u sameysid caleenta this ornamental caleenta, waxaa lagama maarmaan ah in ay biyo ka dheregsan ilaa April ilaa dhamaadka xagaaga - mar laba toddobaad kasta, quudin leh Bacriminta for cacti iyo succulents, tirtir ama ku dhaq caleemaha oo ilaali heerkulka 18-20 ° C. Haddii aadan fileynin ubax Zamiokulkas, ka dibna ubax this noqon doonaa mid ka mid ah ugu wax qabad ee sii kordhaya. Warshadkan qurxinta ee aan caadiga ahayn wuxuu qurxin doonaa wax kasta oo gudaha ah, xitaa haddii uusan ubaxin.
Waa maxay sababta ay uga baxayso qalalan iyo dayrta
Haddii zamiokulkasa (oo sidoo kale loo yaqaan)"geedka dakhliga") ka tago curl, ka dibna qalalan oo dhaco, markaa waa inaadan argagaxin. Tani waxay inta badan ku dhacdaa qanjidhada hoose ee caleen. Tani waa geedi socodka da'da dabiiciga ah. Haddii qaybaha geedka oo dhan ay bilaabaan inay si tartiib tartiib ah u dhacaan, macnaheedu waa inay jiraan waxoogaa khalad ah oo ku saabsan daryeelka. Sababta ayaa sidoo kale u adeegi karta noocyo kala duwan oo farsamo ah.
Ma taqaanaa? Zamioculkas ayaa helay sumcad wayn oo Shiinaha ah. Halkaasna waxaa loo yaqaan "geedka dahabka""Warshad Cusub oo Shiineys ah".
Maxay caleemaha zamiokulkas u noqdaan huruud
Haddii zamiokulkas ay lumiso muuqaal hore oo caafimaad leh, caleemuhu waxay noqdaan jaalle iyo dhacaan, macnaheedu waa in uu jiran yahay wax. Inkasta oo bayaankani aanu had iyo jeer run ahayn. Waxyaaba waa in geedkan ornamental this si tartiib ah u kora. Marka la sameeyo caleemo cusub, dadka waayeelka ah waxay bilaabaan inay jilcaan, si tartiib tartiib ah u rogaan jaale iyo qalajinta. Cawska ubaxa waxaa lagu dabooli karaa dhibco mugdi ah, laakiin, sida hore loogu sharraxay, tani ma aha 100% waqtiga ay macnaheedu tahay in geedka uu jiran yahay. Haddii uu jiro koritaan caleemo cusub ah, dhibcuhu way engegan yihiin, markaa wax walbana waa inay noqdaan. Caleemaha yellowed waxaa lagula talinayaa in la saaro marka ay gebi ahaan qalalan yihiin.
Maxaa dhacaya haddii zamiokulkas uu baxo? Haddii ay dhacdo in caleemaha cusub aysan korin ka dib, tallaabooyin degdeg ah ayaa loo baahan yahay. Isbeddel ku yimaada midabka caleenta wuxuu u adeegi karaa tilmaame ah isbeddel deg-deg ah ee heerkulka, waxyeellada cayayaanka, naqshadeynta ama waraabinta ku filan. Waxaad u baahan tahay inaad si sax ah u go'aamiso sababta keentay muuqaalka caleemaha jaalaha ah, kadibna qaado tallaabooyinka lagama maarmaanka ah si aad u tirtirto.
Shchitovka on zamiokulkas
Shchitovki sida caadiga ah waxay ku dhacdaa suunka ka soo dhirta deriska ah. Marka ugu horeysa, waxay ku dhow yihiin kuwo aan la fahmi karin, laakiin waxay ku dhufanayaan xawaare sare. Calaamad cad oo muuqaalkeeda ah waxay noqon doontaa mugdiga mugdiga. Dadka waaweyn, ayadoo ay ugu wacan tahay dhaqdhaqaaqooda hooseeya, waxaa laga saari karaa isbuunyo qoyan. Dirxiga waxaa lagu baabiiyaa by buufin dhirta biyo biyo ama cayayaanka. Wanaag ayaa ka caawiya "Aktara".
Sidee looga takhalusi karaa caarada caarada
Cayayaanka Spider waxay jecel yihiin hawo qalalan. Waad ogaan kartaa muuqaalkeeda shabakad khafiif ah ee internodeska. Iyadoo dhaqdhaqaaq xoogan ee cayayaan this ka baxo zamiokulkasa bilaabaan inay huruud isu noqdaan iyo dhacdo. Waad burburin kartaa caarada caarada oo leh biyo ama saabuun. Ka dib daaweynta, dhirta waa in la maydhaa biyo badan oo diiran. Haddii tani aysan ku caawin, gali cayayaanka "Akarin" ama "Antikleshch." Waa suurtogal in la buufiyo Zamiokulkas, laakiin waa in lagu sameeyaa goobaha aan deganeyn.
Ma taqaanaa? Ilaha qaarkood waxay ku andacoodaan in zamiokulkas uu yahay sun. Wuxuu u eg yahay aroor kale, wuxuu ka kooban yahay qaybaha oo dhan wuxuu ka soo baxaa aaladda "oxalic acid"-calcium oxalate, taas, marka la qaadana gudaha, waxay sababi kartaa xanuunka afka iyo cunaha, fal-celin xasaasiyadeed, laakiin ma keenayso sunta loo garto.
Sida loola dagaalamo iyo sida loo ogaado xuubka zamiokulkas
Aphids waa cayayaanka yaryar ee ka soo baxa dhinaca hoose ee caleemaha. Waxay noqon kartaa cagaar, cawl ama madow. Aphid ayaa nuugaya casiirka zamiokulkas, caleemuhuna waxay bilaabaan si tartiib tartiib ah oo engegaan. Tirada dhabta ah ee dhicisku si dhakhso ah ayey u socotaa. Waxaad ku dili kartaa xalka nicotin, kaas oo loo diyaariyey sida soo socota: 1 g of nicotin, 1 g of sulfate, 1 litir oo biyo ah saabuun.
Waa maxay sababta gooryaanka caleenta ah ay u muuqdaan iyo sida looga takhaluso
Cayayaanka kale ee Zamiokulkas waa boholo budo ah. Tani waa cayayaanka ugu khatarsan ee amarka cayayaanka, oo saameeya dhirta gudaha. Dhibaatada geedka waxaa keena dadka waaweyn iyo dirxiga labadaba. Waxay ku quudiyaan surwaalka caleemaha, caleemaha iyo burooyinkeeda.
Waa muhiim! Gooryaanka cuntada waa adag tahay in la burburiyo, iyo natiijada ugu guulaha badan waxaa lagama maarmaan ah in si joogto ah loogu daaweeyo dhirta xilliyada kala duwan ee lagu tilmaamay tilmaamaha loogu talagalay diyaarinta.
Gooryaanka Mealy ayaa u muuqda sababtoo ah waxyaabo aan sax ahayn ee zamiokulkas:
Haddii qol qol leh warshad heerkulku ka hooseeyo 18 digrii.
Qoyaan badan ama carrada wasakhaysan.
Ma jiro daryeel joogto ah ee ku xoortay geedihii.
Waxyaabaha dhiman lama tirtiri karo.
Waxaa jira laba marxaladood oo ah guuldarada Zamiokulkas oo leh qoryaha budada ah, kuwaas oo u baahan habab kala duwan oo loola macaamilayo:
Cudurka fudud. Daaweynta marxaladdan cudurku maaha mid adag. Dhammaan goobaha cudurka qaba waa in lagu tirtiraa suufka biyaha lagu qoynayo. Inta lagu jiro bisha, toddobaadkii, waa inaad ku buufisaa dhirta tincture of tubaakada, decoction of cyclamen ama xal basasha. Waxaad tirtiri kartaa tilmaanta qamriga ee antibeptic ee calendula.
Cudurka khatarta ah. Xaaladdan oo kale, habab adag ayaa horey loo soo bandhigay. Toddobaadkiiba waxaad u baahan tahay inaad ku buufiso mid ka mid ah daroogooyinka: "Aktar", "Confidor", "Fitoderm", "Biotlin" ama "Tanrek".